Jelly Bean တွေမြန်မာစာ100%မှန်ပြီ(Android ဖုန်းတစ်လုံးကို မြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်ခြင်း) ~ IT SuBoo
Jelly Bean တွေမြန်မာစာ100%မှန်ပြီ(Android ဖုန်းတစ်လုံးကို မြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်ခြင်း)
11/12/2013 Android, Android app, Android Font Installer, JellyBean တွေမှာမြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်မယ်4comments
Xperia SP,Z,Z1 Huawei C8813,C8813D, P6,Y300,G610 , Motorola XD928 , Samsung Note 2, Glaxy Grand , Z1 , galaxy s3 mini , S Advance , 610 cdma , Sp , c8815 , G520 , Note10.1 N8000 , galaxy tab3, samsaung tab2 , g610 u00 , Xperia Z , sony,G510,Y320
Related Posts: Android, Android app, Android Font Installer, JellyBean တွေမှာမြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်မယ်
Myopaing Paingsoe November 12, 2013 at 3:15 PM
အကိုေ၇ ကျနော်က C8813 ပါ ERROR OCCURRED NO-SU- ERROR ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျ ကျနော်ဖုန်းက ၀ုဖောက်မထားပါဘူးအကို ဘယ်လိုလုပ်၇မလဲ
Aung Toe November 12, 2013 at 5:11 PM
အစ်ကိုရေ၊ ဒေါင်းသွားပြီနော်၊ ကျွန်တော်က c8813 ကိုင်တာပါ။ အခုတော့ဒေါင်းပဲထားတယ်နော်၊ အိမ်ရောက်မှ ဖုန်းထဲထည့်ပြီး လုပ်ကြည့်ပါမယ်နော်၊ နောက် Huawei Media Pad7lite မှာပါ စမ်းပေးပါမယ်နော်၊ ပြီးရင် ပြန်ပြောပြောပေးမယ်ခင်ဗျ။
IT SuBoo November 12, 2013 at 8:25 PM
Myopaing Paingsoe ရေ Phone ကို Root ထားမှ သုံးလို့ရမယ်
Aung Toe November 16, 2013 at 11:58 AM
အစ်ကိုရေ၊ c8813 နဲ့၊ Acend Mate မှာပါရတယ်နော်၊ အဆင်ပြေတယ်၊ သတင်းတွေမှာလည်း ရှေ့နောက်မလွှဲတော့ဘူးဗျ။ ကျေးဇူးပါ။ Huawei Media Pad7lite ကတော့ မစမ်းတော့ဘူးခင်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူ့က andorid ver 4.0.3 မို့လို့ပါ။ မြန်မာစာလည်း မှန်ထားလို့ပ။ါ
iOS7 အတွက် Zawgyi Font အဆန်းလေးတွေပါ
ဖုန်းထဲကနေRoot လုပ်နိုင်မယ့် SuBoo Root Pro apk 10...
Jelly Bean တွေအတွက် မြန်မာစာ100%မှန်သော ၊စာတွေနောက...
Jelly Bean တွေမှာ မြန်ာမစာနောက်မှာ မကျန်အောင်၊မှန်...
Kit Kat Launcher for android
IDM Plus(Internet Download Manager) For Android
စုဗူး ဟင်းချက်နည်းများ စုစည်းမှု apk for android
Jelly Bean တွေမြန်မာစာ100%မှန်ပြီ(Android ဖုန်းတစ်...
မဖြစ်မနေကြုံတွေ့နေကြ ကွန်ပျူတာမှ ပြဿနာများဖြေရှင်း...
Google Play က This item is not available in your c...
Android application တွေ အခမဲ့ ဒေါင်းနိုင်မယ့် Mobo...
PDF TO Word Converter for PC 3MB
နောက်ဆုံးထွက်Smadav 2013 Rev. 9.4လေးKey ပါတယ်ဒေါင...
Facebook ပေါ်ကဗွီဒီယိုဖိုင်တွေ၊ဓါတ်ပုံတွေကို ပတ်မွှေ...